Jesu Anotaura Paruzhinji Kuti Mwanakomana waMwari | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MWARI NDIBABA VAJESU
JESU ANOVIMBISA KUTI VANHU VACHAMUTSWA
Vamwe vaJudha pavanopa Jesu mhosva yekuporesa mumwe murume paSabata, Jesu anovapindura achiti: “Baba vangu vave vachishanda kusvikira zvino, uye ini ndinoramba ndichishanda.”—Johani 5:17.
Zviri kuitwa naJesu hazvirambidzwi nemutemo waMwari weSabata. Paari kuita basa rekuparidza nekuporesa vanhu, ari kutevedzera mabasa akanaka aMwari. Saka Jesu anoramba achiita zvinhu zvakanaka zuva nezuva. Asi mapinduriro aanoita vanhu vari kumupomera anoita kuti vatowedzera kutsamwa, uye vanoronga kumuuraya. Vanyanyogumbukirei kudaro?
Chavagumbura ndechekuti ari kuzviti mwanakomana waMwari uku vanga vatotsamwa kare nekuporesa kwaaita munhu kwavari kuti kutyora mutemo weSabata. Vanoti kutaura kwaaita kuti Mwari ndiBaba vake kumhura kwakafanana nokuti akaenzana naJehovha. Jesu haambovhundutswe nazvo asi anotovaudza nezvekudiwa kwaanoitwa naMwari. Anoti, “Baba vanoda Mwanakomana kwazvo uye vanomuratidza zvinhu zvose zvavanoita.”—Johani 5:20.
Baba ndivo vanopa upenyu, uye vakaratidza kuti vane simba iri pavakamboita kuti vamwe vanhu vamutse vakafa. Jesu anoenderera mberi achiti: “Nokuti Baba zvavanomutsa vanhu vakafa nokuita kuti vave vapenyu, saizvozvowo Mwanakomana anoita kuti vaanoda vave vapenyu.” (Johani 5:21) Aya mashoko anokosha zvechokwadi, uye anoita kuti tive netariro yeramangwana! Kunyange iye zvino, Mwanakomana ari kuita seari kutomutsa vanhu vasina ukama hwakanaka naMwari. Saka Jesu anozoti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Anonzwa shoko rangu akatenda iye akandituma, ane upenyu husingaperi, uye haatongwi asi apfuura achibva murufu achienda kuupenyu.”—Johani 5:24.
Pari zvino Jesu haasati amutsa munhu akafa, asi anoudza vanhu vari kumupomera kuti rumuko chairwo ruchatoitika. Anoti, “Awa iri kuuya mairi vaya vose vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi rake, vobuda.”—Johani 5:28, 29.
Kunyange zvazvo Jesu aine basa rinokosha, anonyatsoratidza kuti ari pasi paMwari, achiti: “Handingaiti chinhu chimwe chete chandinozvitangira ndoga; . . handitsvaki zvandinoda ini, asi zvinodiwa naiye akandituma.” (Johani 5:30) Zvisinei, mashoko ake anotsanangura basa rake rinokosha muchinangwa chaMwari, izvo zvaasati amboita paruzhinji. Asi vanhu vari kumupomera vane humwe uchapupu hwavakanzwa kuwedzera pane huri kupiwa naJesu pachake. Anovayeuchidza kuti: “Makatuma vanhu kuna Johani [Mubhabhatidzi], uye akapupurira chokwadi.”—Johani 5:33.
Vapomeri vaJesu vanofanira kunge vakanzwa kuti makore anenge maviri adarika, Johani akaudza vatungamiriri vechitendero chechiJudha nezveuya aizouya pashure pake, uyo ainzi “muprofita” uye “Kristu.” (Johani 1:20-25) Achiyeuchidza vapomeri vake kuti vaimboremekedza sei Johani, uyo ava mujeri, Jesu anoti: “Imi kwenguva pfupi maida kufara kwazvo muchiedza chake.” (Johani 5:35) Asi Jesu wacho ari kutopa uchapupu hwakatokura kupfuura hwaJohani Mubhabhatidzi.
“Mabasa chaiwo andiri kuita, [kusanganisira rekuporesa raachangobva kuita] anondipupurira kuti Baba vakandituma.” Kuwedzera pana izvozvo, Jesu anoenderera mberi achiti: “Baba vakandituma vakandipupurira.” (Johani 5:36, 37) Muenzaniso wekupupurira kwakaitwa naMwari ndeuya wepakabhabhatidzwa Jesu.—Mateu 3:17.
Vapomeri vaJesu havana kana chikonzero chekuramba kuti mwanakomana waMwari. Magwaro avanoti vanoverenga anotopupurira Jesu. Jesu anopedzisa nerekuti, “Kudai maitenda Mosesi maizonditendawo, nokuti iyeye akanyora nezvangu. Asi kana musingatendi zvakanyorwa naiyeye, muchatenda sei mashoko angu?”—Johani 5:46, 47.
Nei tingati kuita mabasa akanaka paSabata kwaitwa naJesu hakusi kutyora mutemo?
Jesu anotsanangura sei basa rake rinokosha muchinangwa chaMwari?
Uchapupu hupi hunoratidza kuti Jesu Mwanakomana waMwari?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Jesu Anotaura Paruzhinji Kuti Mwanakomana waMwari